Accueil > Gazetin'ny nosy > Vaksinin’ny Covid-19 : Mihamafy ny fanentanana ny mponina
Vaksinin’ny Covid-19 : Mihamafy ny fanentanana ny mponina
Feno iray volana katroka amin’ny sabotsy ho avy izao ny fanombohan’ny fanaovam-baksinin’ny Covid-12 eto amintsika. Tsiahivina fa “doses” miisa 250.000 no nafaran’ny fanjakana malagasy tamin’izao andiany voalohany izao. Raha ny fanazavana nataon’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny Pr Jean Louis Rakotovao, tamin’ny fiandohan’ny herinandro teo, dia mbola vao ny 25 isan-jaton’ireo vaksiny nafarany ireo hatreto no nampiasaina eran’ny Nosy, izany hoe manodidina ny 60.000 eo ho eo. Tsara tsipihana anefa fa ny 17 jona izao no fe-potoana farany afahana mampiasa ireto vaksiny andiany voalohany ireto. Mazava ho azy fa ireo vaksiny ambiny tsy ho lany rehefa tonga io daty io dia tsy ho azo hampiasaina intsony.
Manoloana izany trangan-javatra izany indrindra dia hita sy tsikaritra tato ho ato fa manamafy ny fanentanana ny mponina hanao vaksiny ny fitondram-panjakana. Ahitàna taratra izany ny fanentenana amin’ny haino aman-jery sy any anaty tambazotran-tserasera. Hita miharihary aloha hatreto fa tsy dia rototra firy amin’ny fanaovana ny vaksinin’ny Covid-19 ny Malagasy matoa mbola ny 25 isan-jato amin’ireo 250.000 nafarana no nampiasaina. Tsy azo lavina koa anefa fa manomboka miha-betsaka ny olona manao vaksiny raha ny eto Andrenivohitra no resahina. Azo eritreretina fa mbola nanana ahiahy amin’ny mety ho voka-dratsin’ny vaksiny nafaran’ny fanjakana ny olom-pirenena, ka taty aoriana rehefa nahita izy ireo fa tsy nisy fiantraikany ratsy ny vaksiny tamin’ireo olona efa nahavita dia tapa-kevitra ny hanao ihany.
Raha ny fahitana azy anefa dia sarotra ny inoana fa ho lany avokoa ireo vaksiny Covishield miisa 250.000 nafaran’ny fanjakana tamin’ity andiana voalohany ity. Anisan’ny fanentanana amin’ny haino aman-jery, dia maromaro ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana mba afahana mandany ireo “doses” nafarana, isan’izany ny fametrahana ivon-toerana fanaovam-baksiny amin’ny toerana maro toy ny sekoly. Ankehitriny aza dia efa misy ihany koa ny fiara mandehandeha mitety tanàna ho an’ireo rehetra maniry ny hanao vaksiny. Ho hita eo moa ny raha tena hahitam-bokany izany fanamafisana ny fanentanana ataon’ny fitondram-panjakana izany.